Xubno ka socda Qaramada midoobey oo jowhar tagay – Radio Daljir
Xubno ka socda Qaramada midoobey oo jowhar tagay
Oktoobar 5, 2019 5:51 g 0
Kusimaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa maanta ku qaabilay xarunta madaxtooyada Hirshabelle ee magaalada Jowhar Wafdi ka socday Qaramada Midoobay iyo hay’ado caalami ah oo ay hoggaaminaysay Madaxa hay’ada UNDP Soomaaliya Jocelyn Mason.
Kulanka wafdigan oo ay ka mid ahaayeen madaxa hay’ada IOM iyo UN Habitat ayaa waxaa ay ka wadahadleen kusimaha Madaxweynaha sidii looga caawin lahaa Maamulka Hirshabelle dhinacyada ammaanka,dib u heshiisiinta, federaalaynta,biyaha,caafimaadka iyo kulumo gooni gooni ah waxa ay la yeesheen madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle, labada gole ee maamulka Hirshabeelle, iyo qeybaha kala duwam ee bulshada reer Jowhar.
Wafdigan ayaa waxaa ay sidoo kale la kulmeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle iyagoo ka wadahadlay arrimo la xiriira horumarinta ciidamada booliska,dhisida saldhigyada booliska iyo xabsiyada.
Sidoo kale wafdigan ayaa waxaa ay la kulmeen xildhibaanada baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Hirshabelle. Waxaana kulamada ay saraakiisha ka socotay qaramada midoobay ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed,guddoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamaanka Cabdi Xuseen Cali iyo guddoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Canab Axmed Ciise.
Shariif Xasan: ” Xayiraadi Jubbaland la saaray maanta ayeey burtay” (Daawo)